विश्वकै धनि बिल गेट्स दम्पत्ती हरेक रात सँगै भाँडा माझेर सुत्छन्, प्रेम कहानी छ यस्तो घत्लादो ! « Etajakhabar
विश्वकै धनि बिल गेट्स दम्पत्ती हरेक रात सँगै भाँडा माझेर सुत्छन्, प्रेम कहानी छ यस्तो घत्लादो !
एजेन्सी । विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी माइक्रोसफ्टका मालिक तथा विश्वकै धनि व्यक्ति मध्येका एक हुन् बिल गेट्स । उनको ब्यापारको बारेमा त हामीले थुपै खबरहरु सुन्दै आइरहेका छौं । तर, आज हामी उनको निजी जीवनको बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।मेलिन्डा गेट्स बिल गेट्सकी पत्नी हुन् । उनीहरुले बिहे गरेको पनि २५ वर्ष भइसकेको छ । यि दम्पत्ती विगत २५ वर्षदेखि हरेक राति भाँडा माझ्दै आइरहेका छन् ।
धेरैले सोच्छन् धनि व्यक्तिहरुको जीवनल निकै तामझामका साथ बित्छ । उनीहरुले केही काम गर्दैनन् । घरमा काम गर्नेहरु प्रशस्तै हुन्छन् । प्रशस्तै आराम मिल्छ भन्नेहरुको लागि यो जोडी यस्तो उदाहरण बनेको छ । जसले आम मानिसले झै साधरण जीवन बिताएका छन् । उनीहरु प्रायः आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् अनि सँगै भाँडा माझ्छन् ।मेलिन्डा पति पत्नीको काम बाँडफाँड गरेर गर्नुपर्ने कुरामा विश्वास गर्छिन् ।
यसले परिवारमा खुसी छाउने उनको भनाई छ । सन् १९८७ मा मेलिन्डा बिल गेट्सकै कम्पनी माइक्रोसफ्टमा काम गर्दा उनीहरुको भेट भएको थियो । काम गर्दा गर्दै नजिक भएका उनीहरुले सन् १९९४ मा बिहे गरेका थिए ।
विलियम हेनरी “बिल” गेट्स तृतिय (जन्म २८ अक्टुबर १९५५) एक अमेरिकी ब्यापारी, आविष्कारक तथा माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन । उनी विश्वकै दोस्रो धनी व्यक्ति हुन्। उनले ३० वर्षको उमेरमा लखपति बन्ने सपना देखेका थिए तर ३१ वर्षको उमेरमा नै उनी करोडपति बन्न सफल भए।
गेट्स २८ सेप्टेम्बर १९५५ मा सियेटल, वाशिंगटनमा जन्मिए। उहाँ विलियम एच गेट्स सिनियर र मैरी मैक्सवेल गेट्सका छोरा हुन्। उनको पिता एक प्रमुख वकील थिए, र उनको आमाले पहिलो इन्टर्स्टेट ब्यानसिस्टम र युनाइटेड वे को बोर्ड मा सेवा गरे। गेट्स को मातृ हजुरबुवा जे.डब्लु. मैक्सवेल, एक राष्ट्रीय बैंक अध्यक्ष हुन्। गेट्सको एक ठूलो दिदि, क्रिस्टी (क्रिस्टियन्नी) र एक सानो बहिनी, लिब्बी छन्।
उनले १३ सालको उमेरमा एक निजी तैयारी विद्यालय, लेक्साइडाइड स्कूल मा दाखिला लिए। उनले आफ्नो पहिलो कम्प्यूटर प्रोग्राम यस मेशिनमा लेखे: टिक-टेक-टाइको कार्यान्वयन जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्प्यूटर विरुद्ध खेल खेल्न अनुमति दिए। गेट्स मेशिन द्वारा मोहित थिए र कसरी सहि सफ्टवेयर कोड लाइ कसरी सधैँ राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने सोच थियो। जब त्यो त्यो क्षणमा पछाडि झिकेर, उनले भने, “मेसिनको बारेमा कुनै निट चीज थियो।”
बिल गेट्स र मिलिन्डाको प्रेम
बिल गेट्स लाई नचिन्ने विश्वमा सायदै कोही मानिसहरु छैनन् उनी संसारकै धनि व्यति हुन । बिल गेट्स का कुरा हरु सुन्न र उनका जिवनका विषयमा जान्न सबै मानिसहरु उत्सुक हुनेगर्दछन् । संसारका धेरै सेलिब्रेटी को प्रेम कहानी जस्तै बिल गेट्स र मेलिन्डाको पनि यस्तै रोचक प्रेम कहानी छ । बिल गेट्स ले ठुला –ठुला कार्य गर्न जति परिश्रम गरे त्यति नै उनले आफ्नो प्रेम सफल बनाउन परिश्रम गरेका थिए ।
शनिवारको दिन, पार्किङमा गाडी राखेपछि । गेट्सले मिलिन्डलाई देखे। उनि सोझै मिलिन्डा भएको ठाउातिर गए र प्रेम प्रस्ताव राखे तर मिलिनडा ले अस्विकार गरनि । कारण गेट्सको प्रस्ताव मिलिन्डालाई ‘त्यो अत्यन्त फितलो प्रस्ताव भयो’ मिलिन्डाले भनिन अलि गहन तरिकाले प्रस्ताव गर । त्यसको दुई सातापछि गेट्सले फेरी मिलिन्डालाई प्रस्ताव राखे ।
गेट्सले त्यो बेला मिलिन्डालाई ‘डिनर अफर’ गरेका थिए । तर त्यो प्रस्ताव पनि मिलिन्डाले अस्विकार गरिन । फोन नम्बर दिदै भनिन ‘फुर्सद भएको समयमा फोन गर्नु ।’त्यही रात गेट्सले मिलिन्डालाई फोन गरे। त्यस पछि यि दुवै नजिक हुन थाले । सुरुमा यो प्रेम सम्बन्ध गेट्सकी आमालाइ मन परेको थिएन तर लामो समयसम्म भएको प्रेमलाई गेट्सकी आमाले केही गर्न सकिनन् । त्यो बेलामा गेट्स र मिलिन्डा एउटै कलेज मा पढ्थे। पटि मिलिन्डा पनि माइक्रोसफ्टकै प्रोडक्ट म्यानेजर भइन् । यसले यी दुईको सम्बन्ध थप बलियो बनायो ।